Ragu sidee u arkaan siigada dumarka? | Raganimo University
Ragu sidee u arkaan siigada dumarka?
March 8, 2020~1 minute
Waa su'aal uu na soo waydiiyay qof ka mid ah akhristayaasha Raganimo. Waana su'aal xiiso badan oo ragu si kala duwan uga jawaabeen. Raga ku nool Somalia ee aan waligood ka bixin wadanka arintaan aad ayay uga soo horjeesteen. Halka kuwa qurbaha jooga ay sheegeen in ay jecelyihiin in ay daawadaan saaxiibtood oo siigeysanaysa.
Raga sheegay in ay jecelyihiin ayaa muujiyay in sababtu ay tahay in iyaga xitaa ay ku kacsadaan marka ay daawanayaan saaxiibtood oo is-taabanaysa. Iyagoo markaa ka dib ka qeyb qaadanaya raaxada. Waxay sheegeen in ay tahay bilowga galmo raaxo leh marka gabadhu ay iyadu is-taabanayso.
Kuwa diidan ayaa sheegay in aysan marnaba daawan karin saaxiibtood oo kaligeed raaxaysanaysa. Waxay ku doodayaan in haddii gabadhu ay iyadu isku raaxayn karto ay dareemayaan in isaga laga maarmay. Iyagoo qaarkood ku doodaya in ay ninka shaqadiisa tahay in uu gabadha u raaxeeyo.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa cilmi baaris lagu ogaaday in dumarka aysan ku filnayn galmada guska oo keliya in ay biyo baxaan oo aysan ka maarmin in gacmaha ama afka loogu raaxeeyo. Hadaba ragoow maxaa gabadha ugu diideysaa in ay iyadu isku raaxayso haddii aadan adigu raaxo ku filan siin karin?
Sidee kula tahay adiga? Bal fikradaada Facebook noogu soo gudbi.